बुद्धिले गराइदिए सौगात र बर्षाको विवाह ! « Ramailo छ
बुद्धिले गराइदिए सौगात र बर्षाको विवाह !
फिल्म ‘मेरो पैसा खै’ को रमाईलो गीत रिलिज भएको छ । ‘कान्छी’ बोलको गीतमा अभिनेता सौगात मल्ल र नायिका वर्षा राउत विवाह बधिएको दृश्य छ । कलाकार बुद्धि तामांगले सौगात र बर्षाको बिवाह गराइदिएका छन् । गीतको भिडियोमा सौगात, बर्षा र बुद्धिसँगै छुल्ठिम गुरुंग, प्रमोद अग्रहरी पनि फिचरिंग छिन् । भिडियो हेर्नुस् :
दयाराम पाण्डेको शब्द रहेको गीतमा बसन्त सापकोटाको संगीत छ । गीतमा प्रमोद खरेल र मेलिना राईको स्वर छ । कमल राईको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोलाई हरिघले लामाले खिचेका हुन् । रोज राणाको निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्म असोज ११ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने चर्चा छ ।
कुन्साङसँग मलिकाको माया (भिडियो)